Iko Apple Watches Isina Mvura? Hechino Chokwadi! - Apple Tarisa
iphone 6 screen yakangoenda nhema
sei kuchengeta wifi yakabatana
vakadzi vane nhumbu vanogona kudya nyama yemombe
Iko Apple Watches Isina Mvura? Hechino Chokwadi!
Iwe uchangobva kutora Apple Watch, asi hauiti kana uchifanira kuipfeka kana uri pedyo nemvura. 'Haina mvura here, kana inongodzivirira mvura chete?' unoshamisika. Muchikamu chino, ndiri kuzopindura mibvunzo mikuru miviri:
Apple Watches haina mvura here?
Pane here musiyano mukudzivirira kwemvura pakati peApple Watch Series 1, 2, uye 3?
Iko Apple Watches Isina Mvura?
Apple Watches haisi isina mvura , asi ndizvo inodzivirira mvura . Kupfuurirazve, iyo Apple Watch Series 1 ine yakasarudzika yekudzivirira-mvura chiyero kupfuura iyo Series 2 uye Series 3.
Mvura-Kuramba Kweiyo Apple Inowona Series 1
Iyo Apple Watch Series 1 ine chiyero chekudzivirira mvura yeIPX7, zvichireva kuti yakagadzirirwa kusagadzikana nemvura ichinyudzwa kusvika mita imwe mumvura. Iyo 7 muIPX7 inoratidza kuti iyo Apple Watch Series Imwe yakagamuchira yechipiri yepamusoro IP mamaki ekushomeka kwemvura. Iyo yepamusoro IP mamaki chigadzirwa chinogona kugashira kumvura-kuramba IPX8.
Mvura-Kuramba Kweiyo Apple Yekucherechedza 2 & 3
Iyo Apple Watch Series 2 uye Series 3 vese vane mvura-yekudzivirira chiyero chemamirimita makumi mashanu pasi peIO Standard 22810: 2010. Apple inongokurudzira kupfeka yako Apple Watch Series 2 kana 3 iwe uchiita zviitiko mumvura isina kudzika, semakumbo ekushambira mudziva. Iwe unofanirwa kudzivirira kupfeka yako Apple Watch paunenge uchikwiza nemvura, kufura, uye scuba diving.
sei zvichitora nguva yakareba kudai kubhadharisa ipad yangu
Ini Ndinofanirwa Kuvhura Kiyi Yemvura?
Water Lock chinhu chakaunzwa kuApple Watch Series 2 uye ichiri kubatanidzwa muApple Watch Series 3. Zvakakosha kuziva izvozvo Kiyi yemvura hainyatso kuita yako Apple Kutarisa kuwanda kwemvura - inongokiya yako Apple Watch kudzivirira zvinokanganisa matepi paunenge uchiishandisa pamvura.
Ongorora: Kana iwe ukatanga iyo Open Mvura Kushambira kana Pool Swim Workout muiyo Workout app, Water Lock inogadziriswa yega.
Kuvhura Water Lock nemaoko, swipe kumusoro kubva pasi pechiso chewachi uye tinya pane icon yemvura. Iwe uchazoziva Kiyi Yemvura iripo kana iwe ukaona iyo bhuruu yemvura inodonha icon kumusoro kwechiso chewachi.
Kuti ubude kunze kweMvura Lock, nekukurumidza shandura iyo Dhijitari Korona kusvikira izwi Yakavhurwa inoonekwa pachiso chekutarisa. Paunovhura yako Apple Watch kubva kuMvura Lock, inoridza kurira kunodzinga chero mvura ichiri yakanamatira mutauri wayo.
Iko Apple Kuona Mabhendi Isina Mvura?
Mamwe maApple Watch mabhandi haana mvura, mamwe anodzivirira mvura, uye mamwe haape chengetedzo kubva kumvura zvachose. Kazhinji kazhinji kwete, bhendi rinodzivirira mvura, asi risingadziviri mvura.
Hapana chero eApple Watch mabhendi aunogona kutenga zvakananga kubva kuApple isina mvura, asi mazhinji ari asingadziviriri mvura. Nekudaro, Apple inotaura zvakajeka kuti maMilanese, Link Bracelet, Leather Loop, Yemazuva Buckle, uye maClass Buckle mabhendi haasi asingadziviriri mvura.
Yetatu-Bato Apple Tarisa Mabhendi
Ive nekuchengetera nezvevatatu-vevatengesi vanoti avo maApple Watch mabhendi haana mvura. Yakawanda yenguva, mabhendi avo ari inodzivirira mvura , isina mvura.
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga isina mvura bhendi, tsvaga iyo band band IP kana imwe mvura-yekudzivirira chiyero. Kana bhendi iine IP chiyero che IP68 kana IPX8, zvinoreva kuti ine nhanho yepamusoro yekuramba mvura, ichiigadzira ndoda isina mvura zvachose.
handikwanise kuwana fitbit yangu kuenderana
Inoita AppleCare Kavhara Mvura Kukuvadza Kune Yangu Apple Watch?
AppleCare haireve zvakananga kuvhara mvura kukuvara, asi inovhara yako Apple Watch yezviitiko zviviri zvekukuvara netsaona, zvese zviri pasi pemubhadharo webasa.
Zvakakosha kuti iwe uzive izvozvo kukuvara kwemvura hakuna kufukidzwa muzvirongwa zveAppleCare zvePhones , saka usashamisike kana iwe ukatorwa mari hombe yebasa kubva kuApple.
Hatigone kuvimbisa kuti kugadzirisa kwako kuchavharwa, asi hazvikuvadze kuunza yako Apple Watch muApple Store yako yemuno uye ita kuti vatarise. Usati waenda, tinokurudzira Kugadzirira musangano kuve nechokwadi chekuti mumwe munhu achavepo kuti akubatsire.
Nguva Yekushambira Mamwe Mapapu
Iye zvino zvaunoziva zvakawanda nezve yako Apple Watch, unogona kuendesa nechivimbo kugungwa kana dziva rekushambira. Uye kana mumwe munhu akakubvunza, 'Apple Watches haina mvura here?' iwe unenge waziva chaicho kuvaudza! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo yeApple Watch, vasiye pazasi muchikamu chemashoko.